Fampandrosoana lovainjafy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : Fampandrosoana lovainjafy
Nanatanteraka fambolen-kazo ny Global Voices Malagasy, Namana Serasera Dago ary ny fikambanana Tetezana niaraka tamin’ny mpianatry ny EPP sy ny fokonolona tao Ampanataovana, ny sabotsy 02 Martsa. Fambolen-kazo niavaka satria nasiana fanaovan-tsonia mihitsy mba ho matotra ny fiaraha-mientana. Nanatrika sy nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo ihany koa i Voniary. Fotoana nahafinaritra sy nahavelombolo no azo ilàzana... Lire la Suite →
Nanatanteraka fambolen-kazo tany Benasandratra Fenoarivo ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA tamin’ny 25 Martsa 2017 lasa teo. Nanotrona azy ireo tamin’izany koa ny vondrona Izany Ka Malagasy ao amin’ny Facebook sy ny mpianatrin’ny EPP Benasandratra. Nanararaotra nitafatafa tamin’ny filohan’ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA, Ben J, aho tamin’izay. Indro ary taterina aminao eto izany antsafa izany. Voniary : Inona no... Lire la Suite →
Ho tanterahina ny 12 hatramin’ny 17 Septambra 2016 izao ao amin’ny lapan’ny faritra Matsiatra-Ambony ao Fianarantsoa ny Forum « Economie Sociale et Solidaire » andiany fahatelo eto Madagasikara. Izy io dia hetsika entina ampiroboroboana ireo rafitra mivoy ny fandrosoana ao anatin’ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana. Indro ary entina aminao ny tafatafa nifanaovan’i Voniary tamin’ny mpikarakara dia ny filohan’ny... Lire la Suite →